pet, tpu, kana girazi rakadzikama - zvese zvaunoda kuti uzive kusarudza chinovhara chinodzivirira
Kuru Nhau & Ongororo PET, TPU, kana Inopfavirira Girazi - zvese zvaunoda kuti uzive kusarudza dziviriro yechidzitiro
PET, TPU, kana Inopfavirira Girazi - zvese zvaunoda kuti uzive kusarudza dziviriro yechidzitiro
Kumwe kusuwa mune zvakapfuura, nhasi & apos; s vadziviriri vechidzitiro zviri nyore kuisa, zvakachipa, uye zvirinani kupfuura nakare kose muzvinhu zvese. Kune matatu matatu - PET firimu, TPU (polyurethane), uye yedu isinganetsi - girazi rakadzikama. Uyezve pane nzira mbiri dzekudzitora pane yako kuratidza - yakaoma uye nyoro. Saka pano & apos; zvakawanda nezve mashandisiro anoita ma screen screen uye nezvavanopa.
PET Firimu skrini inodzivirira
Zviripachena, PET haimiriri imbwa kana katsi. Zvinoreva 'polyethylene terephthalate' - mhando yepurasitiki iyo & apos; s inowanikwa mukusiyana kwakasiyana zvichienderana nesarudzo dzakasiyana. Muindasitiri yekugadzira, iyo & apos; s inoshandiswa kwezvinhu zvemazuva ese semvura uye midziyo yekudya. Asi izvi hazvireve kuti PET vadziviriri vemafirimu vanokudzwa mvura bhodhoro repurasitiki. Izvo zvine polyester firimu ine chikanda chisingagone matte kupfeka kune rimwe divi uye nesilone yekunamatira kune imwe.
Hunhu hwacho hwakajeka uye hunowedzera hunoshanda-husina kukwenya rukoko kuchiratidziri chako, asi hauna chekudzivirira. Kuramba-kuramba kwavo isn & apos; haina kunaka seiya yazvino Gorilla Girazi yekumisikidza asi ivo & ivo apos; vachatora iyo rova ​​kuitira kana chimwe chinhu chinotyisa chikasangana nescreen chako.
Izvo zvakachipa, uye kazhinji zvinouya mumapake matatu kana anopfuura. Chinhu chavo chakashata ndechekuti mapurasitiki ndiyo iri nyore kupora kubva pamwaranzi yezuva uye kuwanda kwemafuta kubva paminwe yako, uye hainzwe seyakanaka segirazi paku bata.
Kana uine foni isingadhuri kana yechinyakare, kana iwe & apos; zvakanaka nezvakanyanya uye zvisingadhuri kuchengetedza screen, tora PET mudziviriri. Iyo inogadzira haina & apos; haina basa, asi kana iwe uine nzvimbo yakapfava yechimwe chiratidzo, hapana & apos; hapana chikonzero chekusaenda neyayo. Mikana ndeyekuti vadziviriri kubva kumakemikari akasimbiswa vachatemerwa zvirinani kune chako chishandiso uye havakwanisi kusiya magedhi akasununguka anogona kubatirira pambatya dzako obvisa mudziviriri (zvakamboitika kare).
TPU skrini inodzivirira
TPU (thermoplastic polyreuthane) inotevera mukrini chengetedzo yechikafu cheni. Iyi ipurasitiki inowedzerwa nemakemikari ine zvivakwa zvinosanganisira kukwikwidza, kusimba, mafuta uye kuramba mafuta, uye kuwedzera kuomarara. Sezvo izvo zvinhu zvakaomarara, zvine mashoma & apos; kuzvirapa 'kugona. Izvi zvinoreva kuti kupfava kwayo kudiki kunoipa simba rekutora isina kunyanya kukanganiswa, senge madonhwe mazhinji uye kukwenya kureruka, uku ichichengetedza zvese kana zvakawanda zvezvakaumbwa zvepakutanga. Semuenzaniso, kukwenya kwakareruka kunowanzo siya kakapfava chete mupurasitiki yakapfava, iyo inodzokera zvishoma nezvishoma kune yakajairwa.
Iyo 'yemauto-giredhi' tag vazhinji vadziviriri veTPU vanodada vakatakura vakakodzera kutsanangurwa. Mumwe mugadziri anoti chinhu ichi chinoshandiswa & apos; kudzivirira vemajet '. Uye chii chaunoziva iwe, ichokwadi & apos; ichokwadi! Skim kubudikidza neiyi Aerospace Surface Kudzivirirwa bhurocha - iro & maapos azere nemapureti ekudzivirira matepi anoshandiswa kune 'ndege uye hwindimiri rinotungamira kumucheto kudzivirira'. Nekudaro, kutora TPU kesi kana skrini inodzivirira haiiti & maapositi hazvivimbise & maapos akagadzirwa nemhando imwechete yezvinhu. Asi yako smartphone zvakare haisi & apos; haisi ndege yehondo, handiti?
Kana iwe uchida kubhadhara mutengo wakakwira padiki, anodzivirira TPU, zvine musoro, sarudzo iri nani pane PET firimu. Kana zvirinani, izvo & apos zvichaenda kupa zvirinani kudzivirira dziviriro (kunyangwe iwe usingafanire & kunge uchisundira mikana yako). Iyo & apos; s zvakare yakanaka kune iyo yekubata, kunyangwe isiri & apos; t girazi-rakatsetseka. Sezvineiwo, chikamu chakanakisa ndechekuti iwe & apos; uchazotsanangurira shamwari dzako nevanozivana navo kuti foni yako ine sei 'murwi wekudzivirira ndege'. Yakanaka inotonhorera, huh?
Yakapfava girazi screen vadziviriri
Yakapusa girazi screen chengetedzo pane iyo iPhone, mufananidzo IyoGadgetFlow.com Kudzivirirwa nehasha! Girazi rakadzikama (TG) vadziviriri vechidzitiro ndiwo akanakisa aunogona kutenga Zvekushandisa-zvine hungwaru, yepamusoro TG dziviriro ine akawanda-akaturikidzana, kazhinji anotanga nekuvhunduka kunonoka nesilicon pazasi yepasi, ichiteverwa nePET firimu, uye inonamira yakajeka ku 'apos; ayo ari akadzikama girazi uye oleophobic unhani.
Kwese uku kukwenya, mafuta, uye kushamisika kuchengetedza kunaka kwakamanikidzwa kuita a<0.4mm-thick sheet that's no harder to apply than a PET or TPU protector, and none heavier or otherwise obnoxious.
Mudziviriri wegirazi ari nani pane dzimwe nzira dzese munzira. Iyo ine nani kupenya mwenje, ichiitira iyo yakajeka kuratidzwa. Iyo & apos; s inopesana-inoratidzira uye kupenya kuri kupenya. Iyo ine oleophobic coating, iyo inoderedza zvakanyanya zvigunwe. Iyo ine iyo inonzwika inonzwika yegirazi chairo pasi peminwe yako. Iyo inogona kutodzivisa kukwenya kwejecha, ichiita iyo chete sarudzo inoshanda kune vanofamba-famba.
Uye regai maapos ataure nezvekudzivirirwa kwekuvhunduka. T-girazi vadziviriri vanozvirova pamusoro pehukama hwehukama hwe8H kusvika 9H, zvichireva kuti vakaomarara zvakakwana kudzivisa kukwenya kubva kune chero chinhu icho & apos; s isiri topazi kana corundum (yakanyanya kuomarara aluminium oxide). Asi, ivo havasi & apos; hatigadzirise zvachose-humbowo.
Sezvo iri girazi rakabatiswa isu & apos; tiri kutaura nezvazvo, mune chiitiko chekudonha kunouraya, mudziviriri anozotora kukuvara kwese opwanya kuita zvidiki zvidiki. Mikana yakanaka chaizvo kuti yako yekuratidzira inozopedzisira isina kukuvara pasi. Nekudaro, pachinzvimbo chekutsiva iro skrini rese, iwe & apos; uchazongowana chete mudziviriri mutsva. Izvo zviri nyore pane zvese mweya wako uye chikwama chako.
Sezvaungangodaro waifungidzira, vanodzivirira girazi vadziviriri ndiyo inodhura mhando. Zvakadaro, nekuda kwekuzivikanwa kwavo uye makwikwi anotyisa pakati pevagadziri, mitengo yadzika zvakanyanya.
Dry vs wet screen chengetedzo kuisirwa
Pane nzira mbiri dzekuisa yekudzivirira sikirini - yakaoma uye yakanyorova. Iyo nzira inowanzo taurwa pabhokisi. Kuisa chidzitiro chekudzivirira inogona kuve inonetesa uye isinganetsi basa uye vanhu vazhinji vanozeza kuzviita, vamwe vachitosarudza kubhadhara ma & apos; nyanzvi 'yekuisa imwe yavo. Muchokwadi, vagadziri vevadziviriri vanoziva izvo uye nemhando yega yega ine mukurumbira inoenda kureba kupa zviyero zvese nemirayiridzo kuitira kuti chero munhu agone kuzviita.
Spigen yakadzikama girazi skrini inodzivirira nemapapiro ekumisikidza Iyo yakaoma nzira inochengetedza iyo inodzivirira yakanamatira kuchiratidziro nemagetsi emagetsi. Iko & apos; haina chinamatira chakabatanidzwa, uye iko kunyorera kuri nyore. Iwo chaiwo matanho anozotsanangurwa pane kurongedza, asi apa & apos; s rundown ine mashoma matipi.
Pinda nzvimbo isina guruva. Kumba, imba yako yekugezera mushure mekugezera inzvimbo yakanaka yekuzviitira sezvo iwo mhepo ichava nechokwadi chekuti hapana guruva rinotenderera.
Chenesa foni yako zvakakwana. Vazhinji vadziviriri ikozvino vanouya nemhando dzakapukuta uye kunyangwe zvimiti zvekutora chero zvasara guruva. Shandisa mwenje wakajeka kutarisa kuratidzwa pasi pemakona akasiyana kekupedzisira.
Nekuchenjera enzanisa chidzitiro chinodzivirira kuchiratidziro. Vamwe vadziviriri vanouya nematurusi akakosha kana zvitambi zvinobatsira nekuenderana kuitira kuti iwe & apos usazvitadze. Peel chero epurasitiki iyo & apos; inovhara mudziviriri uye isa mudziviriri pachiratidziro (ita shuwa kuti divi chairo riri kumusoro). Kana iyo & apos isina kuenderana zvakakwana, unogona kuibvisa zvinyoronyoro woedza zvakare.
Shandisa jira rakapfava rakamonerwa pamucheto wekadhi rechikwereti (kana chimwe chinhu chepurasitiki) kubvisa chero mabhuru emhepo uye uve nechokwadi chekuti mudziviriri anonamatira pachiratidziro. Nguva dzose tanga kubva pakati pekuratidzira uye famba uchienda kumucheto.
Peel chero epurasitiki pamusoro pemudziviriri uye iwe & apos; zvapera!
Whitestone Dome Girazi rekudzivirira screen yeiyo iPhone 11 Pro Max Wet kumisikidzwa kunogona kutyisa asi mukuzviita & apos; hazvina kunyanya kuomarara kupfuura iyo yakaoma. Maitiro acho akafanana chaizvo neaya akatsanangurwa pamusoro.
Nekudaro, usati waisa mudziviriri kuchiratidziro, iwe unofanirwa kutanga waisa imwe mvura yekunamatira pairi. Kune nzira dzakasiyana dzekuzviita zvichienderana nerudzi rupi rawakasarudza.
Vamwe vanopa tumabhodhoro tudiki kemushonga mukati. Unopfapfaidza iwo maratidziro kana mudziviriri (kana zvese zviri zviviri, zvinosiyana) uyezve wotofanira kugadzirisa chinodzivirira nekuchimhanyisa zvishoma kusvika iwe & apos; vafare nezvakakodzera. Mushure meizvozvo, iwe unoshandisa iyo yakapihwa squeegee kubvisa chero mabhuru uye yakawandisa mvura pakati pechiratidziro nemudziviriri. Kupukuta kwekupedzisira pamusoro kunofanira kukusiya uine yakanaka, yakachena chitarisiko.
Mamwe marangi anopa nzira iri nani yekushandisa asi zvinoda mari yakati wandei. Nemudziviriri kunouya chakakosha contraption iyo inobata foni yako. Izvo hazvisi chete zvinobatsira kuparadzira iro mvura zvakaenzana, asi zvakare inoita shuwa kuti dziviriro yacho inowirirana uye yakashandiswa zvakakwana musingaite chero kuedza kune kwako.
Uyezve kune makambani anotengesa anodzivirira -makomo ekuchengetedza anoshandisa zvinonamatira zvinoda UV-mwenje kuporesa. Ehe, ivo vanouya neiyo UV mwenje mubhokisi, asi mutengo weimwe unogona kunge wakanyanya kukwirisa (zvichiri zvakachipa pane kuratidza nyowani, hazvo).
Screen vadziviriri uye mu-kuratidza vaverengi veminwe
Fingerprint sensors akaiswa pasi pechiratidziro izvozvi zvakajairika asi neiyo futuristic tekinoroji iyo inovapa simba kwakauya dambudziko. Screen vadziviriri vanowedzera musiyano kune weminwe-yekuwongorora maitiro ayo dzimwe nguva mafoni anogona & apos; t account for. Izvi zvinogona kukonzeresa mukana wakashata wekuwana kuverenga kwakaringana kana kushomeka kwekuenderana pakati pevamwe ma sensors nevadziviriri.
Zvakatoipisisa, dziviriro yescreen inogona kukanganisa kuchengetedzeka kwefoni yako. Iyo yakagadziriswa muverengi weminwe yeSamsung Galaxy S10 yaive nenyaya nevamwe vadziviriri, vachibvumira zvishandiso kuvhurwa neminwe isina kunyoreswa. Nepo nyaya iyi yakagadziriswa, & & amp; s dzakanakisa kuve nechokwadi kuti ndevapi vadziviriri vanokurudzirwa (kana kutsigirwa) nemugadziri weiyo smartphone.
Mudziviriri wechidzitiro angavanze here kukwenya kwechidzitiro?
Mubvunzo wakajairika unouya uchibva kune vanhu zviri pachena kuti havasi kushandisa macomputer macomputer ndeyekuti kuisa imwe chete kunogona kuvanza maratidziro aripo. Uye mhinduro ndeiyi:zvinoenderana. Kuvhundusa, handiti?
Kutanga, zvinoenderana nekuomarara kwekukwaya. Zviripachena, iyo yakadzika kukwenya iko kudiki mukana iwoyo unonyangarika pasi pemudziviriri. Asi zvakanyanya, zvinoenderana nemudziviriri wauri & apos; re kushandisa zvakare. Kana kuviga kukwenya ndicho chinangwa chako, kubheja kwako kwakanyanya kunodzivirira nekunamatira kwemvura. Mvura yacho inozadza iyo minuscule isina chinhu yakasiiwa nekukanda uye kana mudziviriri aripo, inogona kunyangarika zvachose.
Kune akakwenenzverwa madiki, kunyangwe yakajairwa yakaoma-gomo dziviriro inogona kuve yakanaka zvakakwana kuti ivharidze.
Nesarudzo dzakawanda kwazvo dziripo, uye nemitengo yakaringana, kuwana chidzitiro chekuchengetedza chako chive chisingaite. PET zvigadzirwa zvemufirimu ndiyo sarudzo yakanakisa yekuchengetedza screen. Vadziviriri veTPU vanogona kunge vashoma, asi vane yakanakisa chiyero chekugona uye kuomarara.
Chekupedzisira, Vakadzora Girazi vadziviriri vanopa yekupedzisira mukudzivirira uye kunzwa, asi ivo ndivo vanonyanya kukosha muboka. Zvakangodaro, kunyangwe iwo anodhura kwazvo ane musoro kune epamberi mafoni uye mahwendefa. Kusiyana nezviitiko, ivo vanoita zvishoma kuchinja kutaridzika kwechigadzirwa chako chinodhura asi vanogona kukusevhesa mazana emadhora.
renyeredzi cherechedzo 5 foni nhandare
11 yemitambo yakanakisa yeMMO yeIOS uye Android (2021)
Maitiro ekusetazve yako ID yekushambadza, uye sarudza kunze kwekutarisa kushambadzira kwekutsvaga pane Android, iOS uye Windows mafoni
Iwe unofanirwa kudzima anozivikanwa kwazvo maapplication eApple vasati vapa foni yako isingagone kushandiswa
Chikamu chemahara emahara kubva kuMetroPCS uye T-Mobile kwenguva shoma
Facebook Messenger inogumira kutumira mameseji kurwisa zvisiri izvo
Amazon uye Best Buy vane Google & apos; s Pixel 3a uye 3a XL iri kutengeswa pamitero mikuru
Verizon & apos; s 4G inomhanya kazhinji nekukurumidza kupfuura T-Mobile & apos; s 5G network, uye chiratidzo chakasimba
Yekupedzisira Yekufungidzira VIII Yakadzoserwa kunze izvozvi pa Android uye iOS, yakadzikiswa kwenguva yakati rebei
Ichi ndicho chikonzero ini ndinoramba kushandisa smartwatch